Dadaalo lagu baajinayo in la weeraro General Saadaq Joon oo socda | Dhacdo
Home Wararka Maanta Dadaalo lagu baajinayo in la weeraro General Saadaq Joon oo socda
Dadaalo lagu baajinayo in la weeraro General Saadaq Joon oo socda
Wararka ka imaanaya Magaalada Muqdisho ayaa sheegaya inay magaalada ka jirto xiisad ka dhalatay Dowladda Federaalka oo amartay in la soo xiro Taliyihii hore ee Booliska Gobolka Banaadir, General Saadaq Cumar Xasan (Saadaq Joon).
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in Dowladda Federaalka amar ku bixisay in Taliyihii hore lagu weeraro dhismaha cusub, ee uu ka degay Degmada Hodan.
Saadaq Joon oo wata ciidan fara-badan, isla-markaana aad u hubeysan ayaa Arbacadii degay guri ku yaala xaafadda Shirkoole Officiale, kuna dhow Xarunta Wasaaradda Gaashaandhigga ahna Taliska ugu weyn ee Ciidanka Xoogga Dalka.
Booliska sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad ayaa lagu soo daadiyay wadooyinka ku dhow dhow xaafadda Shirkoole, iyadoona laga cabsi qabo in halkaasi uu isku dhac ka dhaco.
Cabdinaasir Xaashi Diiriye oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa Warbaahinta gudaha u sheegay in Ciidamada Haramcad ay culeys soo saareen xaafadaasi, oo ay ku badan yihiin qoyska General Saadaq Joon.
Waxaa socdo dadaalo lagu doonayo in looga hortaggo gacan hadal, iyadoo garab kalena ay wadaan abaabul lagu difaacayo jananka, haddii la weeraro.
Villa Somalia ayaa tuhmeysa in Saadaq Joon ay Isniintii soo adeegsadeen gacmo shisheeye, ka dib markii uu hakiyay kulankii Xildhibaanada Golaha Shacabka ku ansixiyeen Sharciga gaarka ah ee jiheynta doorashooyinka dalka.
Madaxweynaha Galmudug, Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor) oo kulan saacado badan qaatay la yeeshay Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda, Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka codsaday in laga laabto abaabulka ka dhanka ah Taliyihii hore ee Booliska Gobolka Banaadir.
Madaxweynihii hore ee Hirshabelle, Maxamed Cabdi Waare ayaa wax aan fiicnayn ku sheegay dhiilada ka soo korortay Magaalada Muqdisho, iyadoona uu madaxda ugu baaqay in xaaladda la dejiyo, isla-markaana ay jirto fursad weli lagu wadahadli karo.
Wasiirkii hore ee Arrimaha Gudaha Somaliya, Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa) ayaa ku baaqay in la difaaco Saadaq Joon, haddii hoygiisa lagu soo weeraro.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Talaadadii darajadii ciidanimo iyo wixii xuquuq uu lahaa ka xayuubiyay Saadaq Joon.
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, General Cabdi Xasan Maxamed (Xijaar) ayaa Isniinta xilka ka qaaday Saadaq Joon, wax yar uun ka dib markii uu hakiyay kulankii Xildhibaanada Golaha Shacabka ku meelmariyeen Sharciga gaarka.
Si kastaba ha-ahaatee dadaalada socda ayaa la rajeynayaa inay baajiyaan dagaal uu dhiig ku daato.
Previous articleDowladda Somaliya oo war ka soo saartay cadaadiska Beesha Caalamka
Next articleHawlgal dad lagu qabqabtay oo laga sameeyay K/Gaalkacyo (SAWIRRO)